साग, खेल पर्यटन र भ्रमण बर्ष | Hamro Khelkud
मैले कतै पढें क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा करिब ५७ गुणा सानो युरोपेली देश लक्जम्बर्ग, जुन युरोपको आर्थिक हब हो । विश्व मानचित्रमा ४९ भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमध्ये एक लक्जम्बर्ग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको पर्यायवाची रहेको पनि पढें ।
अधिकांश भूपरिवेष्टित देशलाई छिमेकीको टोकाई, गरिबी, पछौटेपन, राजनैतिक खिचातानी र अशान्तिले छाडेको हुँदैन । तर लक्जम्बर्ग भने अन्य भूपरिवेष्टित देशभन्दा बेग्लै शान्त र आर्थिक रुपमा सबल मुलुकका रुपमा सुचिकृत छ । फ्रान्स, जर्मनी र बेल्जियमले घेरिएको यो युरोपेली मुलुक भारत र चीनले चेपिएको दुई ढुंगाबीचको तरुल नेपाल जस्तो होइन । बरु, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको पर्याय हो ।
भूपरिवेष्टित, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालसँग लक्जम्बर्ग धेरै कुरामा मिल्दोजुल्दो छ । तर लक्जम्बर्गको बिशेषता भनेको भाषिक, सांस्कृतिक, स्वदेशी, विदेशी, धनी, गरिब, सानो जात, ठूलो जात, महिला, पुरुष, गाउँले, सहरिया, नेता, नागरिक, सभ्य, असभ्य कुनै बिषयमा विभेद नहुनु हो ।
जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक विभेदले मुलुक कहिल्यै उँभो लाग्दैन । राज्यको विकास बजेट र अवसरको समान वितरणमुखी प्रणाली अवलम्बन नगर्ने हो भनेपनि देशले समृद्धिको बाटोमा पाइला अघि बढाउन मुस्किल नै हुन्छ । नेपालले सोच्नुपर्ने यहींनेर हो । किनकी नेपालले २०२० लाई भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउँदैछ । जुन, आन दशरथ रंगशालामा भव्य कार्यक्रमका बीच उद्घोष हुँदैछ आरम्भको ।
यो त्यही रंगशाला हो, जहाँ यही मंसिर दोस्रो साता १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)को भव्य उद्घाटन एवं समापन समारोह भएको थियो । पहिलो र आठौं संस्करण पनि यसै रंगशालामा भएको थियो । यसले पनि हाम्रो विकासको गतिलाई देखाइरहेको छ । कम्तीमा यसपटक खेलकुद नेतृत्वले काठमाडौं बाहिर पोखरा र जनकपुरसम्म दक्षिण एसियाली मुलका नागरिकलाई पुर्याउन सफल देखियो ।
साग जस्तो बृहत खेलकुद महोत्सव आयोजनाको ठोस उद्देश्य मुलत खेलकुद स्पर्धा हो खेलकुद निकायका लागि, तर सरकारको स्वार्थ भनेको देश देखाउनु नै हो । आफ्नो विकास र समृद्धिको कथा सुनाउनु नै हो । तर १३औं सागमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको टाउकोमा सबै थोपरिदियो ।
फेरि यतिबेला सरकार अर्को ठुलो महाअभियानमा छ । दुई तिहाइको सरकारले झण्डै २० लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपाल देखाउने स्वर्णिम सपना देखेको छ । केपी ओली सरकारको नारा नै छ –‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’
मेरा एक जना मित्र छन् नेपाल सरकारको अधिकृत । निकै बौद्धिक छन् । जो भर्खरै जापानमा दुई बर्ष पर्यटन सम्बन्धि पढेर फर्किएका छन् । एक दिन कफी पिउँदै गर्दा सिद्धार्थ ग्रुपको एस क्याफेमा उनलाई मैले सोधें –‘हाम्रो देश जापान जस्तै कहिले बन्छ? ‘नेभर(कहिल्यै बन्दैन)’– उनले एक चुस्की कफीमै जवाफ दिए ।
नेपाल सरकारको सोंच, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको ढाँचातर्फ उनले संकेत गरेको म बुझ्न सक्दछु । पर्यटन सम्बन्धि पढेर फर्किएपछि सरकारले आयोजना गर्न लागेको भ्रमण बर्ष २०२० को सचिवालयमा काम गरेर आफ्नो प्रतिभा र क्षमता देखाउने उनको सोंच थियो, तर अन्तै जागिरको स्थानन्तरण अन्तै भएसँगै उनको जोेश हल्का घटेको छ । हाम्रो सरकारको चरित्रको यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
हरेक देशले अरबौं रकम खर्चेर बृहत खेल महोत्सव गर्नुका पछाडि निश्चित उद्देश्य बोकेका हुन्छन् । चीनले २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिक आयोजना गर्दा होस् या बेलायतले २०१२ मा लन्डन ओलम्पिक वा दक्षिण कोरियाले एसियाली खेलकुद आयोजना गर्दा खास उद्देश्य र स्वार्थ राखेका थिए । चीनले भौतिक विकासको चरमोत्कर्ष देखाउने उद्देश्य राखेको थियो भने बेलायतले नयाँ र सिर्जनशील सोचका लागि विश्वमा आफु नै अगाडि रहेको देखाउन लन्डन ओलम्पिकको ठूलो भारी बोकेको थियो ।
मिस वर्ल्ड आयोजनाका कारण चीनप्रति विश्व समुदायको दृष्टिकोण नै बदलियो । चीनले संसारलाई आफ्नो विकास, समृद्धि र वैचारिक तथा सांस्कृतिक सोंचमा आफुहरु अगाडि आइसकेको देखाउन पनि यस्ता ठुला इभेन्ट आयोजनाको आँट गर्छ । चीनसँग हरेक कामको सामथ्र्य पनि छ भन्ने देखाउन पनि उ चाहन्छ ।
निरंकुश राणा शासन, एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालले विश्व समुदायमा आफ्नो खास परिचय स्थापित गर्नुपर्ने चुनौति छ । सदियौंदेखि सबैले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेको मुलुक हो नेपाल । विविध कारणले अपेक्षित प्रगतिको बाटोमा नगएको पनि तितो सत्य हो ।
यसबिचमा नेपाललाई हामी स्वाधीन राष्ट्र हौं, संसारको सर्वोच्च शिखर हामीसँगै छ, गौतम बुद्ध हाम्रो देशमै जन्मिएका हुन् । हिमाल, पहाड र तराई जस्ता भौगोलिक विविधता, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता भइकन पनि एकताको सुत्रमा गाँसिएको मुलुक नेपालको आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै सभ्यता छ भनेर विश्वलाई देखाउन केही त्यस्ता इभेन्ट आवश्यक पक्कै थिए । नेपाल भ्रमण बर्ष पनि विश्वलाई नेपाल देखाउने सरकारको लक्ष्य हो । १३औं साग आयोजना त्यसको रिहर्सल हुनसक्थ्यो । सरकार त्यसमा चुकेकै हो ।
सागमा झण्डै सात हजार खेलाडी र खेलकर्मीलाई निशुल्क नेपाली पर्यटनको सदभावना दुत बनाएर पठाउन सक्ने अवसर नेपालसँग थियो । यसैगरी सागको समाचार संकलन गर्न आएका दक्षिण एसियाका बिभिन्न देशबाट आएका झण्डै एक सय ५० पत्रकारलाई नेपालको सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने माहोल दिनुपर्थ्यो ।
साग देश जोड्ने अवसर पनि थियो । संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि विभाजित मनलाई एक ठाउँ ल्याउने सुवर्ण अवसर थियो साग । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका युवाले केही नभएपनि स्वयंसेवक भएर सागको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्थे । राज्यले हामीलाई समान व्यवहार गरेको छ भन्ने अनुभुति गर्न सक्थे । साग काठमाडौंमै सिमित भइदियो । नेपाल सरकार यसमा चुक्यो । भव्य र सभ्य भनिएको १३औं साग देशका लागि कति सार्थक बन्यो समिक्षाकै बिषय बनेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही महिनाको अन्तरमा सरकार बदलिरहने नियतिबाट आम नेपाली अघाइसकेका छन् । नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले स्थायित्वको वचन दिंदै देशकै मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकै हो । विकास र समृद्धि सबैका मुखमा झुन्डिएका हुन् । सागलाई खेलकुदको कार्यक्रममा मात्र सिमित गरिदा जातीय, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदभन्दा माथि रहेको खेलकुदले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेन । यो सत्य हो । व्यवस्थापनको बिषयमा यो सागलाई सफल मान्ने सुचक पनि अत्यन्त कम छ । पदक संख्याले नै सबैलाई खुसी दिलाएको पक्कै हो । पदक कसरी धेरै आए? यो पनि अर्को समिक्षाको बिषय हो ।
यसअघि सन् १९९९ मा दोस्रोपटक साफ आयोजना गर्दा पनि नेपालले आफ्नो इतिहासमा सबैभन्दा बढी ३१ स्वर्ण जितेर पदक तालिकामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । यसपटक पनि त्यो कीर्तिमानलाई निरन्तरता दिन सफल भयो । यसरी नेपाल प्रगतिको बाटोमा अघि बढेको भन्ने ठाउँ पनि अवश्य छ ।
२०७२ को महाभुकम्पपछि केही सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय एक साता सागमा आएका खेलाडी र पदाधिकारीको जमघटले तरंगित बनाइदियो । यिनै विदेशी खेलाडी र खेल पदाधिकारीकै कारण सन् २०२० मा ती मुलकबाट अरु थप पाहुना नेपाल घुम्न आउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । सबै स्कुले विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षित गराएर तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो । हरेक गल्ली र सडकमा अल्मलिएका पर्यटकलाई मिठो वचनका साथ व्यवहार गर्ने र सहयोग गरिदिने स्वभावको विकास नागरिकमा आवश्यक छ ।
सरकारले यस्ता अभियान कतै चालेको छैन । फगत कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम मात्र भइरहेका छन् । जम्बो टोली निम्ता बाँड्न हिंडेको हिंड्यै छ । फेरि दशरथ रंगशाला भव्य साउन्ड सिस्टमको गर्जनले गुञ्जिनेछ । तर खास पर्यटक कसरी टिकाउने भन्ने तरिका कतै सिकाइएको छैन । सरकारले एक तिरबाट दुई शिकार गर्न सक्थ्यो । भ्रमण बर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सागमा खर्चेको रकमले नै भ्रमण बर्षको प्रचार प्रसार पर्याप्त हुन सक्ने ठाउँ थियो । त्यसलाई भव्यता दिनबाट नेतृत्व चुकेकै हो ।
तैपनि साग खेल्न र खेलाउन आएका खेल पदाधिकारीकै प्रचारप्रसारले आगामी बर्ष नेपालमा दक्षिण एसियाली मुलुकका पाहुना बढ्ने निश्चित छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकका पाहुनाको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सागको अहिलेको प्रचारप्रसारले आगामी बर्ष ती मुलुकका पाहुनाको हिस्सा अझ बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी पाहुना भारतबाट आउँछन् । हवाई मार्गबाट आएका पाहुनाको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा भारतका पाहुनाको हिस्सा झण्डै १७ प्रतिशत थियो । त्यसबाहेक स्थल मार्गबाट आएका भारतीय पाहुनाको तथ्यांक कतै राखिएको हुँदैन । स्थलमार्गको आगमन पनि पर्याप्त हुने आँकडा छ ।
सार्क मुलुकमध्ये धेरै पर्यटक नेपाल आउनेको दोस्रो सूचिमा श्रीलंका पर्छ । सन् २०१८ मा श्रीलंकाले नेपालको पर्यटन बजारको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । तेस्रो सुचीमा बंगलादेश पर्छ । अघिल्लो बर्ष बंगलादेशले नेपाली पर्यटन बजारको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो । ती बाहेक भुटान, पाकिस्तान, मालदिभ्सबाट पनि आउने पाहुना हुन्छन् । ती मुलुकबाट निकै नै कम संख्यामा पाहुना नेपाल आउँछन् ।
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को पुर्वसन्ध्यामा पोखरा, काठमाडौं र जनकपुरले सागको खेल खेलाउँदा सहभागी मुलुकका खेलाडी तीनवटै पर्यटकीय क्षेत्रमा बाँडिए । ती खेलाडी र खेल पदाधिकारीबाटै अहिले पर्यटकीय क्षेत्रले प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । नेपालगन्ज सागको चौथो गन्तब्य हुनसक्थ्यो, नेतृत्व यसमा चुक्यो । नेतृत्व भन्नुको अर्थ यस क्षेत्रबाट चुनिएका हरेक जनप्रतिनिधि यसमा चुकेकै हुन् । अन्यथा भारोत्तोलन, महिला क्रिकेट र महिला फुटबल नेपालगन्ज र कोहलपुरमा आयोजना गराउन सकिन्थ्यो ।
नेपालमा खेल्न आएका ती खेलाडी सम्बन्धित मुलुकका सेलिब्रिटी पनि भएकाले उनीहरुले खेल्न पुगेका सहरको प्रचारप्रसार खुलस्त गर्ने भएकाले पनि २०२० को भ्रमण बर्षलाई यसले फाइदा दिलाउन सक्छ । त्यसबाहेक सहभागी मुलुकका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना खेलाडीको खेल प्रगति र यहाँको सौन्दर्यताबारे प्रचारप्रसार गरेकाले पनि सागबाट पर्यटनले फाइदा लिन सकिने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा व्यवसायीले बेलाबेला गर्ने गरेको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमभन्दा पनि सागले गरेको प्रचारले बढी व्यापकता पाउने निश्चित छ । नेपालमा खेल्न आएका खेलाडीको प्रदर्शनबारे ती मुलुकका सञ्चारमाध्यमले गर्ने समाचार सम्प्रेषणले पनि नेपालले प्रचारप्रसार पाउने नै हो । साग सकिएपछि स्वदेश फर्केका खेलाडीबाट पनि थप प्रचारप्रसारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं, पोखरा र जनकपुर मात्र नभई सिंगो नेपाल घुम्न कुनै असुरक्षा छैन भनेर खेलाडी र खेल पदाधिकारीबाट उनीहरुको मुलुकमा सन्देश फैलिनेछ । पर्यटनमा सुरक्षाको निश्चितता चाहिन्छ । नेपालमा कुनै असुरक्षा नभएकाले घुम्न जाँदा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि सम्प्रेषण भएको छ । जुन सिंगो नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक हो ।